News - Duqa Magaalada Dingxi, Gobolka Gansu Dai Chao ayaa booqday shirkadeena si aan ugala hadalno una dhiirrigelino mashruuca iskaashiga ee alaabada qurxinta darbiga daahyada aluminium
Duqa Magaalada Dingxi, Gobolka Gansu Dai Chao ayaa booqday shirkadeena si aan ugala hadalno una dhiirrigelino mashruuca iskaashiga ee alaabada qurxinta darbiga daahyada aluminium
Duqa Magaalada Dingxi, Gobolka Gansu, Dai Chao ayaa booqday shirkadeena si aan ugala hadalno una dhiirrigelino mashruuca iskaashiga ee qalabka qurxinta darbiga daahyada aluminiumka。
On 1st Sebtember 2020, Dai Chao, Kuxigeenka Xoghayaha Guddiga Xisbiga D / Hoose ahna Duqa Magaalada Foshan, wuxuu kormeeray Guangdong Jianhan Group wuxuuna wadahadal la yeeshay Zhou Jianxi, Guddoomiyaha kooxda Jianhan, si ay ugala hadlaan mashruuca iskaashiga aluminium alaabada qurxinta qalabka derbiga, oo la is dhaafsaday aragtidiisa iyo isafgarad laga gaadhay arrimo gaar ah oo ku saabsan horumarinta mashruuca.
Dai Chao wuxuu booqday Jianhan Group's veneer aluminium iyo aqoon isweydaarsiyo qalabka wax lagu qurxiyo ah iyo bandhigyada wax soo saarka, wuxuuna si faahfaahsan u fahmay taariikhda horumarka shirkadda, qaybaha ganacsiga, waxqabadka ganacsiga, qaabeynta gobolka iyo jihada iyo yoolalka isbadalka mustaqbalka iyo casriyeynta. Waxa uu sheegay in Jianhan Group, oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo isku dhafan cilmi baarista iyo horumarinta, qaabeynta, soo saarista, farsamaynta iyo iibinta qalabka qurxinta aluminium, ay ku raaxeysato sumcad sare warshadaha. Wax soo saarka waxaa lagu gartaa culeys fudud, wasakh la'aan, qiime jaban iyo badbaado sare, iyo rajada suuqa waa mid aad u wanaagsan. Dingxi waa magaalo guntin muhiim ah "Hal Belt Iyo Hal Waddo", oo leh faa'iidooyin wax ku ool ah alaabta ceeriin, gaadiidka, shaqada, suuqa, barxada, bay'ada iyo dhinacyada kale. Wadashaqeynta Dingxi waxay hubaal fureysaa safar cusub oo ku saabsan isbadal ganacsi iyo kobcinta horumarka. Waxaan si daacad ah ugu martiqaadeynaa kooxda Jianhan in ay maalgashadaan oo ay horumariyaan Dingxi, oo ay la socdaan fikrado cusub, teknoolojiyad iyo maareyn, waxaan kor u qaadi doonnaa casriyeynta shirkadaha waxaanan ku dadaalaynaa sidii aan u dhisi lahayn Dingxi Jianhan una noqon laheyd Shiinaha tiknoolajiyad sare.
Duqa magaalada Dai Chao ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha Jianhan Group
Jianxi Zhou ayaa sheegtay in Jianhan Group ay muddo dheer qorsheyneysay inay horumariso suuqa waqooyi-galbeed, qaabkiisuna uu ahaa mid cad. Dingxi waxay leedahay hibeyn khayraad wanaagsan, rajo suuq ballaaran iyo jawi ganacsi oo aad u wanaagsan. Shirkaduhu waxay ku kalsoon yihiin kuna kalsoon yihiin inay dhisaan shirkad tusaale ah oo ka tirsan shirkadda Jianhan oo ku taal Dingxi si dib loogu habeeyo fresco iyo isbadal iyo casriyeyn.
Hogaamiyaasha Xafiiska Maaliyada ee Dowlada Hoose iyo Gudiga Maamulka ee Aaga Horumarinta Dhaqaalaha ee Dingxi ayaa kaqeyb galay howlaha kor ku xusan.
Waqtiga boostada: Mar-30-2021